A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke IPFS 0.6 na ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
E wepụtalarị ụdị ọhụrụ nke IPFS 0.6 na ndị a bụ akụkọ ya
N'oge na-adịbeghị anya e kwupụtara ọkwa nke ụdị ọhụrụ ahụ usoro faịlụ dị iche iche IPFS 0.6 (Usoro InterPlanetary File), nke na-etolite ụlọ ahịa faịlụ zuru ụwa ọnụ etinyere n'ụdị netwọk P2P mejupụtara sistemụ ndị otu. IPFS jikọtara echiche ndị emeburu na usoro dịka Git, BitTorrent, Kademlia, SFS, na Weebụ ọ dịkwa ka otu BitTorrent "peer" (ndị ọgbọ na-ekere òkè na nkesa) na-agbanwe ihe Git.
IPFS dị iche na ịza ajụjụ site na ọdịnaya kama ọnọdụ na aha aka ike. Edere koodu ntinye akwụkwọ na Go ma kesaa ya n'okpuru akwụkwọ ikike Apache 2.0 na MIT.
Na IPFS, njikọ iji nweta faịlụ metụtara ya na ọdịnaya ya ma gbakwunye hash nke ọdịnaya. Adịghị enwe ike weghachite adreesị faịlụ ahụ na-enweghị isi, enwere ike gbanwee naanị ya mgbe ọ gbanwere ọdịnaya ahụ.
N'otu aka ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịme mgbanwe na faịlụ ahụ na-enweghị ịgbanwe adreesị (ụdị ochie ahụ ga-anọgide na adreesị ochie ahụ, nke ọhụrụ ga-adịkwa site na adreesị dị iche, dị ka hash nke ọdịnaya faịlụ ahụ ga-agbanwe).
Ebe ọ bụ na njirimara faịlụ na-agbanwe na mgbanwe ọ bụla, iji ziga njikọ ọhụrụ oge ọ bụla, a na-enye ọrụ iji jikọta adreesị na-adịgide adịgide nke na-echebara ụdị faịlụ dị iche iche (IPNS), ma ọ bụ iji dozie aha aha yiri nke FS na DNS. (MFS (Usoro Mgbanwe Agbanwe) na DNSLink).
IPFS na-enyere aka idozi nsogbu akụkọ dị ka nchekwa nchekwa (ọ bụrụ na nchekwa mbụ adịghị n'usoro, enwere ike ibudata faịlụ ahụ na sistemụ ndị ọrụ ndị ọzọ), imegide mgbochi mmachi (igbochi ga-achọ igbochi usoro sistemụ niile nwere otu data ahụ) na ịhazi ohere na enweghị njikọ Internetntanetị na-aga n'ihu ma ọ bụ mgbe ogo nke usoro nkwukọrịta adịghị mma (ịnwere ike ibudata data site na ndị kacha nso na mpaghara mpaghara) ).
1 Kedu ihe dị ọhụrụ na IPFS 0.6?
Kedu ihe dị ọhụrụ na IPFS 0.6?
Ọhụrụ version bụ ọwọrọiso maka ntinye nke mbufe dabere na usoro QUIC, nke bu ihe ntinye na UDP protocol nke na-akwado otutu otutu njikọ ma na-enye usoro ezoro ezo nke TLS / SSL.
Na IPFS, oghere maka ịnweta njikọ UDP na-amalite na akpaghị aka n'otu adreesị netwọk na ọdụ ụgbọ mmiri dị ka onye njikwa na-ebufe TCP. A na-eji QUIC eme ihe maka mbata na ịpụ apụ, na mgbe ijikọ na ọnụ ọhụụ, ọ bụrụ na QUIC adịghị, ọ ga-alaghachi na TCP.
Ihe nke abuo dị mkpa bụ sNwee nkwado nkwado ụgbọ njem, dabere na usoro Noise wee mepụta dịka akụkụ nke libp2p, ntanetị ntanetị maka ngwa P2P.
Mgbe nhazi mbụ nke njikọ ahụ, mgbanwe data data niile n'etiti ndị sonyere ezoro ezo ma chekwaa ya ka ọ ghara ịnụ ntị. NOISE dochie njem nke SECIO, mana TLS 1.3 na-aga n'ihu na-eji dị ka ụzọ bụ isi nke encrypting njikọ n'etiti ọnụ.
ISDIS mkpọtụ dị mfe iji mejuputa ya ma nọrọkwa dị ka njem na-ebugharị ebumnuche ụwa nke enwere ike itinye n'ọrụ na asụsụ mmemme dị iche iche.
Ọhụrụ mbipute na-enye ohere itinye peeji nke gị "404 ahụghị" ma tinye nkwado nhọrọ maka usoro ngbanwe Base36, nke kachasị mma maka data alphanumeric na-enweghị mmetụta dịka aha ngalaba (mgbe ị na-eji Base32, igodo Ed25519 IPNS bụ bytes abụọ karịa oke na oke subdomain, yana Base36 ọ dabara na njedebe).
Ọzọkwa, agbakwunyere nhọrọ "pairing" na ntọala, nke na-akọwa ndepụta nke ọnụ iji jikọta, jigide njikọ, ma jikọtakwa iji chọpụta njikọ "siri ike" n'etiti ndị ọgbọ a na-ejikarị eme ihe.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa ahụ, site na ịga na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » E wepụtalarị ụdị ọhụrụ nke IPFS 0.6 na ndị a bụ akụkọ ya
Ihe a bu ihe m huru na mbu, mana enweghi m ike ghota ihe eji ya. Echere m na enwere ọrụ ma ọ bụ ngwa nke na-eji ya maka ihe ha, mana agbalbeghị m ọ bụla.
Fenix ​​OS: ọdịdị nke macOS na Windows Mere na Spain